5 Khuraafaadka ku saabsan shukaansigu Qof walba muhim u tahay True
From sitcoms in Majaajilooyinkaygu waxay ka taataabtay in sheekooyinka laga saaxiibo, aynu wada ognahay qaar ka mid ah xaqiiqooyinka adduunka-qiray saabsan shukaansi. Si kastaba ha ahaatee, sida ay sayniska inta badan, kuwaas oo “Xaqiiqooyinka” waa khalad. Sidaas dhab aad u ogaato yar oo ku saabsan filimada hindiga ka badan, waxaad u malaysay sameeyey, ilaa hadda.
Khuraafad #1: Arintii waa daahir cidlo.
Iyada oo Hollywood, waana la wada ogyahay “gamer nerdy ayaa marnaba taabtay boob ah” hafray. More si, marka aan maqlo gamer erayga, waxaan u muuqdaan in ay ka fekeraan nin aad u dhuuban ama baruurta kuwaas oo hindiga ka kooban yahay Madaxweyne Siilaanyo Oo CHAT ka dhaca qaybta hoose ee ay waalidka. Sida laga soo xigtay sayniska, kuwaas arintii nerdy u badan tahay inuu baxo taariikho badan aan arintii. More, iyadoo suuqa sii kordhaya ciyaaraha lagu daro ay kor u kaceen kulan multiplayer, ciyaaraha waxaa dhab noqon demiya baraf caan. Sidoo kale, aynu iloobin kulan online halkaas oo ay dadku la kulmay oo dhacay jacayl.
Khuraafad #2: Shukaansi Online ma aha oo kaliya fursan laakiin waxa kaliya oo soo jiidata khasaaray.
Nasiib darro, ay sabab u tahay dadaalka marketing ugu baahan in lagu daro run profiles, shukaansiga online helay rap xun sanado. Sida caadiga ah, in maankiinna waxa uu bilowday dadaal ay god ee la soo dhaafay si aad u hesho saaxiibkiisa Naf; Si kastaba ha ahaatee, aragtiyo kala kuwani waa khalad. Waxaa jiray Baaritaanadii u danbeeyay in ay muujiyeen in mid ka mid ah shan users site shukaansi saaxiibkiisa Naf ay ka heli online. Sidoo kale, 94% dad ah oo la abuurto xiriir online bixi doonaa taariikhda labaad, taasoo ah hab ka badan boqolkiiba dadka la kulmi offline. Maxay tani? Sababtoo ah shukaansi online waa iyada oo kombiyuutar, dadka waxa ay noqon more daacad ah oo ku wehlin doona sida ay yihiin “in aad la hadasho computer ah”. Ka fikir waxa ku saabsan, aad daadan doono dhiiranaan aad qof aad kulmay kaliya ee baar? Sabab kale oo weyn si ay taariikhda online waa in ay is-sii iyo noqdo caan. Fursado ah in aad la kulmi doonaa qof qaba isku danahaaga waa mid aad u sarreeya.
Khuraafad #3: In xiriirka, Haweenka waa dareenka iyo ragga waa macquul.
Waxaan dhammaan arkeen filimada xad-dhaaf ah oo muujinaysa in warsan Haweenka Cadha daraadeed ayaa oohin badan nin ama dissecting xiriirka halka nin u muuqdo mid diimmoon iyo suave halka had iyo jeer ku guuleystay wadnaha naagta. Science ayaa sheegay in rag ka badan yihiin caadifad ay saameeyeen riwaayadaha xiriirka ka badan haweenka, ay taasi ma muujiyaan. Haweenka guud ahaan waxay leeyihiin xiriir dhow qoyska iyo saaxiibada jidaynayey for badan oo taageero dareen gaar ahaan marka ay timaado dhibaato nin. Guys u muuqdaan in ay kaliya qarsan ee la-hawlgalayaasha ay samaynta dagaal gaar ahaan adag oo iyaga ku.
Khuraafad #4: Haweenka waxay dishaa hindiga.
Iyadoo-joogsan karo in lagu sheekeesto yihiin haween madax banaan oo aan u baahnayn xiriir ama nin si ay u buuxiyaan yihiin Hashii ab ka ab badan, waa dhab qaldan. Haweenka isu sheekeesto fiirsan yihiin inta badan ee xiriir kala jinsiga ah. Ragga oo is doodaa ah ayaa la sheegay in ay nolol galmo waa mid lagu qanco ka badan kuwa aan. Sidaas halka lagu sheekeesto caadi ahaan loo arkaa geliayay, Haweenka mannish in dhab ahaantii ma aha kiiska.
Khuraafad #5: Lammaanayaasha ku wada nool yihiin guurka ka hor si wanaagsan isugu diyaariyeen.
Society ayaa ka soo wareegtay xaqiiqada ah in laba xaas lahayn wada qaadan meel ku nool dembigu. Laakiin maalmahan ku dhawaad ​​ka dhigayaa dareen. Waxay u muuqataa macquul ah si ay u soo guurto oo aad muhiim ah oo kale ka hor inta go'an tahay sharci ah in laga yaabo inuu in furiinka. Sidaas, waxaad ka heli kartaa haddii Mr. Xaqa run ahaantii waa Mr. Right. Sida laga soo xigtay sayniska, kaasoo lammaaneyaasha u wada noolaa guurka ama hawlgelinta hor leeyihiin heerka furiinka sare ah iyo qanacsanaanta guurka hoose. Lammaanayaasha ee ciyaaro guriga ka hor hawlgalka waxa gaar ahaan Dhibka haddii ay u tijaabiso xiriirkooda. Haddii aad sida tijaabo lammaanahaaga ka Aamin fursadda in aadan la mid sax ah. Arrin kale oo in ay iman karaan play waa fikrada ah degaya. Lammaanayaasha, maalmahan, daweeyo wada nool yihiin sidii tallaabo kale ee geedi socodka shukaansi ah. Marka ay bilaabaan wada nool, ay u arkaan in ku dhawaad ​​macquul ahayn in ay kor u jebiso sidii ay dhaqaale ahaan iyo caadifad ay ku ekaataan.
Oo halkaas waxaad u leedahay, hadda aad ogaato wax dheeraad ah oo ku saabsan filimada hindiga.
© Copyright 2017 Taariikhda My Butros. La dhigtay by 8celerate Studio
In wingwoman waa shaqo muhiim ah! Waxaad si loo hubiyo in aad kor u dhiso kalsoonida iyo qaadaaya ...